LG C1 OLED Vs LG G1 OLED: Kedu ihe dị iche? - 【Nkọwa】
AhịaTOP. 1. XNUMX
LG 43UP7500LF - Smart TV 4K UHD 108 cm (43 ") na Quad Core Processor, HDR10 Pro, HLG, Virtual Surround Sound, HDMI 2.0, USB 2.0, Bluetooth 5.0, WiFi
Kporie ọdịnaya dị na 4K SmartTV dakọtara na ọgụgụ isi
LG C1 OLED na LG G1 OLED: gịnị bụ ihe dị iche?
A na-atụ anya LG C1 OLED na LG G1 OLED ka ha bụrụ nhọrọ abụọ kachasị mma maka OLED TV na 2021. Dabere na nnukwu mmeri nke CX OLED nke afọ gara aga na iwebata usoro Gallery OLED, gbakwunyere imewe, enweghi obere ihe. ikwere na ụdị ndị ọhụrụ a ga-eme ihe ọ bụla ma melite ndị ochie.
LG C1 na LG G1 bụ 4K TV na ogwe OLED, na-akwado Dolby Vision HDR, wee jiri ụdị LGOS smart platform LG kachasị ọhụrụ, mmalite dị ukwuu maka TV ọ bụla.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-anwa ịhọrọ LG OLEDs kachasị mma nke LG, enwere esemokwu dị iche iche ole na ole iji tụlee, gụnyere ọnụahịa, na LG G4 nwere oke ịrị elu ọnụ ahịa dabere na ọnụahịa US. Ruo ugbu a. .
Ma usoro ihe ngosi nke Osisi Osisi Osisi na-enye ihe kariri LG C1, ma ihe ohuru ohuru ya bu "OLED evo" na-eme nnukwu ihe di iche na onyonyo zuru oke? Anyị ga-amaba n'ime ihe niile ịchọrọ ịma n'okpuru.
1 LG C1 na LG G1: ọnụahịa na nha
2 LG C1 na LG G1: OLED evo kọwara
3 LG C1 na LG G1: imewe na nkọwa
4 LG C1 na LG G1: mmechi
LG C1 na LG G1: ọnụahịa na nha
N'ezie, ị ga-anọ n'ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba dị mma iji nwee ike ịhọrọ ọkacha mma. LG G1 OLED bụ TV dị oke ọnụ, ọ bụ ezie na ọnụahịa ndị America anyị nwere ugbu a adịghị elu dị ka atụ anya ya.
Maka LG G1, ị na-eche € 2199 (ihe dị ka € 1600 / AU 2900) maka ụdị 55 pouces (OLED55G1PUA) dị na Eprel, ma ọ bụ 2999 2100 (ihe dị ka € 3800 / AU 65) maka 65 pouces OLED1G77PUA dị site na ngwụcha Machị . Modeldị nke 4,499-inch nke dị na Machị na-ere maka € 3,300 (ihe dị ka € 5,900 / AU € XNUMX).
N'ụzọ dị ịtụnanya, ụdị nke afọ a dị ọnụ ala karịa - nke 65-inch GX gbakọtara na € 3,499 / € 3,199 / AU, 5,999, yabụ anyị na-ahụ 15% dobe na RRP maka G1 site na otu nha.
LG C1 OLED dị ọnụ ala karịa, nke bụ ọnụahịa mmalite nke LG CX dị iche iche n'afọ gara aga. Ọ na-amalite na 1,499 48 maka anụ ọhịa nke 1,499, anyị ga-atụ anya ịhụ ọnụahịa yiri nke € 2,800 na UK ma ọ bụ AU € 55 na Australia. Modeldị 1,799-inch na-efu 1,799 65 (eleghị anya € 2,499), 2,499-inch na-efu € 77 (eleghị anya € 3,799) na 3,799-inch na-efu € XNUMX (eleghị anya gburugburu € XNUMX).
Isi ihe dị iche bụ na enwekwara ọhụụ 83-inch maka LG C1, nke na-apụta na, 5,999 (gburugburu € 4,400 / AU € 8,000). A kwadoro nke a maka LG C1, yabụ onye ọ bụla nke na-achọ 4K OLED buru oke ibu kwesịrị ịga maka usoro C.
LG C1 OLED TV (2021) (Ebe E Si Nweta Foto: LG)
LG C1 na LG G1: OLED evo kọwara
Nke a nwere ike ịbụ ọdịiche kachasị mkpa ịghọta dịka ọ dị ọhụrụ maka 2021. LG G1 Gallery usoro OLED ga-egosipụta teknụzụ teknụzụ 'OLED evo' iji nyere aka melite nchapụta, otu n'ime isi adịghị ike nke OLED TVs.
LG abụghịkwa naanị akara TV nke na-aza mkpa maka mmelite na mpaghara a. Sony nwere olile anya na ihe nhazi nke XR nwere ike ime ka nchapụta nke OLED mejuputara, ebe onyonyo ohuru nke Samsung na egosiputa otutu puku ncha nke ekele ha na teknụzụ QLED.
LG C1 na LG G1: imewe na nkọwa
Otu n'ime nnukwu esemokwu bụ otu ị ga - esi kwụsị ịgbanye igwe onyonyo ndị a. LG C1 na-abịa site na ugwu TV dị n'etiti, mana enwere ike ịgbanye ya na mgbidi. A na-emepụta LG G1 n'ụzọ doro anya maka mgbidi na-arịgo, yana imepụta ihe dị nkenke iji kwado mgbidi. Enwere, bido na 2021, nhọrọ Galili Guzoro tripod ọhụrụ ma ọ bụrụ na ịnweghị mgbidi ma ọ bụ ebe nchekwa dị n'aka, yana enwere ike iji ya maka ogo 55 "na 65" maka usoro abụọ.
LG C1 na LG G1 na-ekerịta ọtụtụ ụdịdị ahụ, gụnyere afọ a AI a9 Gen 4 processor. LG na-ekwu na mgbawa ọhụụ ya ga-eji mmụta miri emi iji nyochaa ihe pụrụ iche na ihuenyo ahụ, nke pụtara na ndị mmadụ, nzụlite, na ngalaba ederede dị iche na ibe ha.
Usoro abụọ a ga-agụnye ọdụ ụgbọ mmiri HDMI 2.1 anọ, dịka ụdị nke afọ gara aga, yabụ ị ga-enweta nkwado 4K / 120Hz maka ntọala kacha mma na PS5 na Xbox Series X. You'll ga-enwetakwa nkwado 4K / 120Hz maka ntọala kachasị mma na PS5 na Xbox X. 'Usoro na-akwado HDR10, HLG, na Dolby Vision, ewepu HDR10 + (nke LG anaghị akwado) na DTS: X (nke LG wepụrụ afọ ole na ole gara aga).
LG nọ na-agba agba egwuregwu na-agba egwuregwu egwuregwu egwuregwu kemgbe afọ ole na ole gara aga, a ga-ahụkwa uru ya na nnabata nke VRR (Variable Refresh Rate) na ALLM (Low Latency Auto Mode), yana Nvidia G-Sync na FreeSync maka ndị ahụ. Ana m atụ anya. iji belata nbudata ihuenyo mgbe ijikọ PC egwuregwu.
Ulo oru abuo a nwere 40W nke ekwuputara nke oma nke ewuru n'ime sistemụ ntaneti abuo nke 2.2 na Dolby Atmos. Anyị chọpụtara na ụdị afọ gara aga dị ntakịrị na bass, ndị na-achọ ahụmịhe ọdịyo ka mma nwere ike ịga maka ụda ụda dị iche, mana nke ahụ bụ ọ dịkarịa ala ebe dị mma ịmalite.
LG G1 Gallery Series OLED, na Gallery Guzosie (2021) (Ebe E Si Nweta Foto: LG)
LG C1 na LG G1: mmechi
Ọ bụ ezie na LG CX na LG GX siri ike ịkọwa ọdịiche, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụdị na nha, ndị na-anọchi ha 2021 mepụtara nnukwu ọdịiche dị n'etiti usoro C na G-usoro.
LG G1's OLED evo technology na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma maka LG OLED TV dị elu, nke na-eme ka nhie dị elu ma e jiri ya tụnyere C1, ma ọ bụ dị oke mma mgbe etinyere ya na mgbidi.
G1 dị ntakịrị karịa, na ndị gị bụ ndị nrọ nke 48-inch OLED TV ma ọ bụ, na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, 83-inch OLED, LG C1 ga-abụ nzọ gị kacha mma. Ka anyị ghara ichefu na ọ ga-efu ihe dị ka ọkara ego maka otu nha nhọrọ.
Guo ezigbo ntuziaka LG TV na akụrụngwa ị nwere ike ịzụta taa